FAQS - i-Buddhatrends
Ndiyakwazi ukuhlawula imali kwi-delivery? / Ngaba ndinakho imali yakho ngenxa yokuba ndingenayo ikhadi lekhredithi.
I-Paypal inikezela ukukhuselwa komthengi kwaye iyanceda abasebenzisi ngokubonelela ngeendlela ezikhuselekileyo kunye nemigaqo emihle yembuyekezo. Yingakho sikhuthaza ukusebenzisa i-Paypal ukugqiba ukuthengiswa kwakho apha ngokukhuselekileyo ngaphandle kweengozi zekhadi lesikweletu.
Kuthiwani ukuba andinayo iAkhawunti ye-Paypal ?!
Don't worry as you do not need to own a PayPal account to pay: you may enter your credit card's data directly at PayPal and complete your payment. You Akudingeki ukuba ubhalise i-akhawunti ye-PayPal.
1) QINISELISA "UKUHLOLA NOKUBHALA KWEKHADI KWEKHARITYHULI
2. FUMA IINKCUKACHA ZAKHADI ZAKHARITYHULA
Idilesi, i-imeyile kunye nenombolo yefowuni ingacelwa kwakhona ngokuya kwilizwe lakho.
Xa usuqedile, nqakraza kwi "Hlola kwaye uqhubeke".
3. CALISA "PLA MANJE"
4. CACISA "HAYI, MTHANDA" NJENGOBA UKUFUNEKA NGOKUKHAKHA I-PAYPAL ACCOUNT. UMTHETHO WAKHO UQHUBILE!
YENZA! UYA KUFUMANA KUNYE UKUQHUBEKA KWEMEMAIL UKUFUMA UKUPHATHISWA KWAKHO! NJONGA UKWENZA :)
Inqubomgomo yethu yokubuya iphela Iintsuku ze-30 ukususela mhla ufumana umkhiqizo (IE isayina ukusuka kwinkonzo yakho yeposi). Ukuba iintsuku ze-30 ziye zadlula ukusukela ngelanga, asikwazi ukukunika imali okanye ukutshintshiselana.
Ukuba iphoso liphezu kwethu (lixutywe, liphosakele xa sifika), siya kuhlawulwa ngokuqinisekileyo ukubuyisela ukuthumela :)
Ukuze uvumeleke ukubuyisela, umcimbi wakho makangasetyenziswanga kwaye kwimeko efanayo ukuba uyifumene. Kufuneka kwakhona kubekwe kwiphakheji yangaphambili.Ukugqiba ukubuyela kwakho, sifuna irisidi okanye ubungqina bokuthenga. Please do not send your purchase back to the manufacturer. Nceda uqaphele ukuba ukubuyiswa kweemali zokuthunyelwa kwe-postage akuyi kuhlanganiswa nathi. Sincoma i-imeyile kwiqela lethu loxhaswa ngeenkcukacha ezipheleleyo zophando.
Ukubuyisela i-Order yokubuzisa, nceda uqhagamshelane nathi ngefom yoqhagamshelwano kwisayithi yethu
Xa kuthengwe i-oda yakho, uza kuba neeyure ze-24 ukucima umyalelo wakho. Siza kuhlawula ngokutsha xa ukhansela umyalelo wakho kwiiyure ze-24. Nangona ukuba iiyure ze-24 zidlulile ekubeni wenze umyalelo, kuya kufuneka ulinde iplasela yakho ukuba ifike phambi kokuba ungawabuyisela.
Xa ukubuya kwakho kufunyenwe kwaye kuhlolwe, siya kukuthumela i-imeyile ukuze sikuxelele ukuba siyifumene into yakho ebuyiweyo. Siza kukwazisa kwakhona ngokuvuma okanye ukulahlwa kwembuyekezo yakho.
Ukuba uvunyiwe, ke imali yakho iya kubuyiselwa, kwaye i-credit izakusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwikhadi lakho lekredithi okanye indlela yokuqala yokuhlawulwa, ngaphakathi kwintsuku ethile yeentsuku kuxhomekeke kumthengisi wakho wokuhlawula.
NGAPHAMBILI KANYE OKANYE UKUQHUBEKA
Ukuba awufumani ukubuyiselwa kwembuyekezo okwangoku, qwa lasele i-akhawunti yakho yasebhanki kwakhona.
Emva koko qhagamshelana nenkampani yakho yekhadi lesikweletu, kungathatha ixesha ngaphambi kokuba imali yakho yokubuyiselwa imali ibhalwe ngokusemthethweni.
Ukuqhagamshelana ngokulandelayo nebhanki yakho. Kukho ixesha elide lokuqhuba ixesha ngaphambi kokubuyiswa kwembuyekezo.
Q- Ikhowudi yeposi iyimfuneko yokubeka umyalelo kodwa andinayo kwilizwe lam. Ndingayenza njani umyalelo?
Imiyalelo yase-US iya kuthunyelwa nge-USPS kunye nee-Orders zamazwe ngamazwe ziya kuthunyelwa ngokubhekiselele ekuzalisekeni kwesiko kuvela kuyo.
NDIYA KU FUMANA I-NUMBER?
Imveliso nganye iyakuthunyelwa kwiindawo ezizalisekileyo ezahlukeneyo kwihlabathi lonke njengoko iqela lethu lophando lwemiveliso lichitha ixesha lokuvelisa umgangatho kodwa iimveliso ezinokuthengwa. Nangona singenako ukubonelela ngokulandelela imveliso yakho, inkampani yethu iqinisekisiwe ngokugcwele kwiipakethi kunye naziphi na izinto ezilahlekileyo ziya kuhlanjululwa mahhala kuwe.
YINTONI INKOSI EYA KUVENZISWA NGOKUSEBENZA
I-courier service ngokwenene incike kwiziko lethu lokuzaliseka. Oku kungenxa yokuba umkhiqizo wethu unxweme kumazwe ahlukeneyo ukuqinisekisa ukuba ufumene intengo efanelekileyo. Iinkonzo ze-Courier ziyahlukahluka kwilizwe elizweni. Ngaphandle kwesiseko esomeleleyo seshishini kunye nenkonzo yeposi ye-courier asikwazi ukufumana amaxabiso angabizi ngokutsho kwejubane esiya kulahlekelwa kwiimarike zehlabathi ezifana ne-Amazon kunye njalo.
Amaxabiso abonakaliswe kwi-receipt yakho KUNYE hlukile kwizinto oyalele kodwa nceda ungakhathazeki! Ngokuqhelekileyo esi sikolo esizalisekileyo siya kwenza ntoni ukuphawula njengamaxabiso aphantsi kakhulu okanye ukuphawula izinto njengezipho ngokupheleleyo. Oku kukuthintela iintlawulo / iintlawulo zokungenisa iintengiso ezithe zenziwa ekupheleni kwakho kumazwe athile ezi ntlawulo zongeziweyo zibiza kakhulu.
Nabani na ekhaya angayifumana iphakheji egameni lomthengi. Ngokuqhelekileyo umthumeli uya kushiya isiliphu sokuqokelela ukuba akukho mntu uhlala ekhaya kwaye unokuqokelela ipelsela yakho kwipostile elisondeleyo.